बिष्णु बरालको घर घेर्न पुगे सारा गाउँले ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
June 24, 2021 AdminLeaveaComment on बिष्णु बरालको घर घेर्न पुगे सारा गाउँले ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
यसै बीच मृ’तक बिष्णु बरालकी आमाको टोली छोरीको घरमा पुगेकी छन । उनीहरु छोरीको सासु ससुरा र ज्वाईसंग केहि प्रश्न सोध्न त्यहाँ पुगेकी हुन् । उनिसंगै सैयौ गाउलेहरु पनि त्यहाँ पुगेका छन । भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोस्ः